XOG: Wafdiga Shariif Sh. Axmed oo laga hor istaagay safarkoodii Baledweyne & Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG: Wafdiga Shariif Sh. Axmed oo laga hor istaagay safarkoodii Baledweyne &...
XOG: Wafdiga Shariif Sh. Axmed oo laga hor istaagay safarkoodii Baledweyne & Wararkii ugu dambeeyay
Muqdisho (Halqaran.com) – Iyadoo maanta la fillaayay inay Magaalada Baledweyne gaaraan xubno uu horkacayo Gudoomiyaha Xisbiyada Madasha Qaran, Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa laga hor istaagay in ay ka dhoofaan Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Maamulka Garoonka Aadan Cadde ayaa Shariif Sheekh Axmed oo xubnaha safarkan ku wehlinaya uu ka mid yahay Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynihii hore ee Soomaaliya u sheegay in aanay maanta taggi karin Magaalada Baledweyne.
Maamulka Garoonka ayaa tani ku sababeeyay, iyadoo maanta lagu wado inay Magaalada Baledweyne gaaraan masuuliyiin uu ugu sareeyo Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Khayre.
Sidoo kale, shaqaalaha diyaarad gaar loo leeyahay oo wafdiga Shariif Sheekh Axmed u qaadi laheyd Magaalada Baledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa lagu wargeliyay in ay ka baaqsato safarkeeda Baledweyne.
Xafiiska Ra’iisal Wasaare Khayre ayaa u arka inaanay Baledweyne wada qaadi karin wafdiga Gudoomiyaha Xisbiyada Madasha Qaran iyo wafdiga kale ee Ra’iisal Wasaaruhu uu hormuudka u yahay.
Siyaasiyiinta Xisbiyada Madasha Qaran ayaa maalmo ka hor ku dhawaaqay in laba boqol kun oo dollar ay ugu talagaleen dadka ay saameeyeen fatahaadaha Webiga Shabelle, maantana uu ujeedkoodu ahaa in ay soo qiimeeyaan marxaladda ay barakacayaasha ku sugan yihiin.
Wararka laga helayo Garoonka Aadan Cadde ayaa sheegaya in buuq uu ka taagan yahay Garoonka, ka dib markii kooxda Shariif Sheekh Axmed ay u cuntami weyday in laga reebo safarkoodii Baledweyne.
Wararka ayaa intaa ku daraya in uu socdo dadaalo lagu doonayo in xiisadan soo korortay lagu qaboojiyo, waxaana uu xaalka noqon doonnaa in labada wafdi uu midkood maanta u amba baxo Baledweyne, halka kan kalena lagu qanciyo in maalinta berrito ah uu taggo.
Xal kale ayaa la soo sheegaya in uu jiro, kaasoo ah in labada wafdi uu midkood hadda uu kicitamo Baledweyne, waqti koobana uu kaga soo laabto, si wafdiga kale ugu suurta-gasho in isla maantaba uu gaaro magaaladaasi.
Isku soo wada duub, waxay aheyd 22-kii bishii September markii wafdi uu hoggaaminayay Shariif Sheekh Axmed, Madaxweynihii hore ee Somaliya laga hor istaagay safar ay ku taggi lahaayen Magaalada Kismaayo, iyagoo xilligaasi doonayay in ay Kismaayo kaga qaybgalaan caleemo saarka Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam.
Wafdiga Shariif oo laga hor istaagay